त्रिवि भन्छः पद रिक्त छ, डा. अग्रवाल भन्छन्ः म नै डीन हूँ – ।।दाङ खबर।।
Home / मुलुक / त्रिवि भन्छः पद रिक्त छ, डा. अग्रवाल भन्छन्ः म नै डीन हूँ
त्रिवि भन्छः पद रिक्त छ, डा. अग्रवाल भन्छन्ः म नै डीन हूँ
२०७४, २८ पुष शुक्रबार १४:५६	मुलुक
काठमाडौ, पुस २८ । चार दिनका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डीनमा पुनर्वहाली गरेका डा. शशी शर्माले बिहीबारबाट अवकाश पाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट डीन बनेका शर्माको अवकाशसँगै आईओएमको डीन को भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयले औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, डीन पद रिक्त रहने बताएको छ ।
‘त्रिविमा छलफल नभएका कारण डीन को बन्छ भनेर यसै भन्न सकिन्न’ रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यतिञ्जेल डीन पद रिक्त नै रहन्छ । डीनको कार्यभाल केही दिनका लागि सहायक डीनले सम्हाल्नेछन् ।’
डा. गोविन्द केसीको अनसनद्धारा आईओएमको डीनमा नियुक्त भएका डा. जगदीश अग्रवालले शर्माको अवकाश लिएसँगै आफू नै डीन रहेको दाबी गरेकाछन् ।
‘सर्वोच्चले डा. शशी शर्मालाई चार दिनका लागि पुर्नबहाली गरेपनि मेरो नियुक्तिलाई गैरकानुनी भनेको छैन । त्यसैले मेरो नियुक्तिलाई लिएर अन्यथा बोल्न पनि मिल्दैन’ उनले भने ।
आफूले शुक्रबारबाट पुनः डीनको पद सम्हालेको भन्दै अग्रवालले भने, ‘यस पदका सन्दर्भमा केही शुद्धाशुद्धी गर्नु पर्ने हो भने त्रिविले कुनै निर्देशन दिनु पर्‍यो । हैन भने अदालतबाट आएको आदेश नै यस पदमा रहिरहनको लागि पर्याप्त छ ।’
शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि नै डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन थालेका थिए । त्यही क्रममा उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्यो भने उनी पक्राउ पनि परे । तर, उनको माग अनुसार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि न्यायिक छानविनको दायरमा आएका छन् ।
२०७४, २८ पुष शुक्रबार १४:५६
Previous प्रचण्डले लेखे देउवालाई मन्त्री फिर्ता बोलाएको पत्र, सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप
Next देशभरका नर्स आन्दोलित, १ घण्टा काम छाडे